အဝေးရောကျခဈြသူတှအေတှကျ စပရိုကျဖွဈစမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ - Lifestyle Myanmar
အဝေးရောကျခဈြသူတှအေတှကျ စပရိုကျဖွဈစမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ
အနဝေေးတဲ့ အခဈြရေး(LDR)ဟာ ခိုငျမွဲဖို့ ခကျခဲလှပါတယျ။ သို့သျောလညျး အဆကျအသှယျမပွတျနမေယျ၊ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ နားလညျမှုရှိပွီး သစ်စာရှိမယျဆိုရငျ ပိုမိုခိုငျမာတဲ့ အခဈြရေးမြိုးကို ဖှဲ့စညျးနိုငျပါတယျ။ တခါတရံမှာ LDR တှဟော တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အနီးကပျနတေဲ့ စုံတှဲတှထေကျတောငျ အခဈြရေးပိုခိုငျမာတာကို တှရေ့ပါတယျ၊
သူကွိုကျနှဈသကျတဲ့အရာလေးတှကေို သတိရတတျမယျ၊ သငျ့အတှကျ သူလုပျပေးတဲ့ အရာအားလုံးကို သတိထားမိမယျဆိုရငျ အဝေးရောကျ သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကိုပိုပွီးတောငျ တနျဖိုးထားစနေိုငျပါတယျ။
အနဝေေးတဲ့ အခဈြရေးတဈခုကို အသကျဝငျအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ? မငွီးငှသှေ့ားအောငျ ဘယျလိုထိနျးသိမျးမလဲ?
ယနခေ့တျေနညျးပညာတှကေ ပိုပွီးတောငျလှယျကူပါတယျ။ ခဈြသူနဲ့ ဝေးနတေဲ့အခြိနျမှာ သငျ့ခဈြသူ အံ့လားသငျ့သှားအောငျ၊ သငျ့ကို ပိုခဈြလာအောငျ ပွုလုပျပေးနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခြို့ ရှိပါတယျ။
၁။ ရိုမနျ့တဈဆနျတဲ့ ညစာ
သငျတို့နှဈယောကျက အနဝေေးတဲ့ ခဈြသူတှေ ဖွဈနရေငျတောငျ သငျ့ခဈြသူနှငျ့ နီးကပျနတေယျလို့ ခံစားရစနေိုငျတဲ့ နညျးလမျးမြားစှာ ရှိပါတယျ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မိုငျတှဝေေးနပေမေယျ့ ရိုမနျ့တဈဆနျတဲ့ ညစာဖနျတီးနိုငျပါတယျ။
Video call ချေါပါ။ အငျတာနကျကနေ ခကျြခငျြးတှနေို့ငျပွီး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ စကားပွောဆိုနိုငျပါတယျ။
သငျတို့ရဲ့ anniversary လိုနမြေို့းမှာ အထူးညစာစားခငျြတယျဆိုရငျ ရိုမနျ့တဈဆနျတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှေ၊ ဖယောငျးတိုငျတှနေဲ့ အခနျးကို အလှဆငျနိုငျပါတယျ။
နှဈယောကျစလုံး ကွိုကျတဲ့ အစားအသောကျလေးတှေ ရှေးခယျြပါ။
၂။ ကိုယျ့ခဈြသူကို ရညျစူးတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျ
သူ့အတှကျ ရညျစူးထားတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျက မြှျောလငျ့မထားတဲ့ အခြိနျမှာ သငျ့ခဈြသူကို အံ့အားသငျ့စဖေို့ နညျးလမျးတဈခုဖွဈနိုငျပါတယျ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ဝေးကှာနပေမေယျ့ သငျ့ရဲ့ ခိုငျမာတဲ့ အခဈြခံစားခကျြမြားကို အပွညျ့အဝ ဖျောပွနိုငျတဲ့ ရိုမနျ့တဈသီခငျြးမြားစှာ ရှိပါတယျ။
သငျဘယျလိုခံစားရတယျဆိုတာ အကောငျးဆုံးဖျောပွပေးတဲ့ special သီခငျြးတဈပုဒျကို ရှေးခယျြပါ။
ပိုပွီး စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးအောငျ ၊ ရိုမနျ့တဈဆနျအောငျ သူ့အတှကျရညျစူးတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျကို ရဒေီယိုအသံလှငျ့ဌာနမှတဆငျ့ သီခငျြးတောငျးဆိုနိုငျပါတယျ။
ရဒေီယိုမှ ကွညောတဲ့အခါ သငျ့ခဈြသူနားထောငျနိုငျအောငျ ဖုနျးချေါဆိုပါ။
ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာ တငျပေးတာ သို့မဟုတျ မကျဆခြေျ့ကတဆငျ့ ပို့ပေးပါ။
ဂဈတာတီး၊ သီခငျြးဆိုပွပွီးလညျး သငျ့ခဈြသူကို ရို နိုငျပါတယျနျော။
၃။ အခဈြကဗြာတဈပုဒျ ရေးပေးပါ
သငျ့ခဈြသူကို အခဈြသီခငျြးလေးတှေ၊ အခဈြကဗြာလေးတှေ၊ ရိုမနျ့တဈဆနျတဲ့ စာသားလေးတှေ ပေးပို့နိုငျပါတယျ။
လူတိုငျးမှာ ကဗြာရေးဖို့ ပါရမီ မပါကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျရငျအခုနျဆုံးခံစားခကျြမြားကနေ သီခငျြးတဈပုဒျ သို့ ကဗြာတဈပုဒျအဖွဈ ခရြေးနိုငျပါတယျ။
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ဝေးကှာနတောက ခကျခဲလှပမေယျ့ သငျ့ကိုယျပိုငျစကားလုံးတှေ၊ ခံစားခကျြတှနေဲ့ ကဗြာတဈပုဒျရေးခွငျးက သငျ့ဘဝမှာ သူကဘယျလိုအရေးပါကွောငျး သငျ့ခဈြသူ သိစမေယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ စိတျခံစားမှုတှေ၊ ခံစားခကျြတှကေို စာသားထဲမှာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဖှငျ့ပွောပါ။
ကဗြာအားလုံးက ကာရနျညီဖို့ မလိုပါဘူး။ အရေးကွီးဆုံးက ရိုမနျ့တဈဖွဈပွီး စိတျရငျးမှနျသာ ဖွဈရပါမယျ။ အကူအညီလိုရငျ သငျ့အရေးအသားကို တိုးတတျစဖေို့ အကွံပေးခကျြတှေ အှနျလိုငျးမှာ ရှာဖှနေိုငျပါတယျ။
၄။ ဟာသဗီဒီယိုလေးတှေ ပို့ပေးပါ
ယနခေ့တျေမှာ သိပျအားထုတျစရာမလိုဘဲ ဟာသဗီဒီယိုလေးတှလေုပျဖို့ tik tokလို applications မြားစှာရှိလာပါပွီ။ ဒါ့ပွငျ ဗီဒီယိုတဈပုဒျကို ပို့ဖို့၊ လကျခံဖို့ မိနဈအနညျးငယျသာ ကွာပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ ရီစရာကောငျးတဲ့ သရုပျဆောငျမှုနှငျ့အတူ ရယျစရာဗီဒီယိုလေးတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ သငျ့ရဲ့ RSအမှတျတရလေးတှေ၊ ပြျောရှငျစရာအခြိနျလေးတှကေို စုစညျးပွီး ပို့ပေးနိုငျပါတယျ။
သငျ့ဖုနျးပျေါမှာ ဗီဒီယို appတဈခု ဒေါငျးလုတျဆှဲပါ။
သငျ့ကိုယျသငျ မှတျတမျးမတငျခငျြဘူးဆိုရငျ ရိုမနျ့တဈစာသားလေးတှေ၊ ဓါတျပုံလေးတှကေို စုစညျးပွီး ဒါမှမဟုတျ သငျ့အသံမှတျတမျးထဲမှာ ဓါတျပုံတှထေညျ့တာ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
ဆန်ဒရှိရငျ YouTube သို့ သငျ့ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာ ဗီဒီယိုကို တငျနိုငျပါတယျ။
၅။ ခဈြသူကို လကျဆောငျတဈခုနဲ့ စပရိုကျလုပျပေးတာ
သငျ့ခဈြသူအိမျကို deli နှငျ့ လကျဆောငျတဈခု ပို့ပွီး စပရိုကျလုပျပေးပါ။
သငျ့ခဈြသူရဲ့ အိမျ သို့ အလုပျလိပျစာ သငျ့မှာရှိရငျ သငျပို့ခငျြတဲ့အခါတိုငျး စပရိုကျလကျဆောငျ ပို့ပေးနိုငျပါတယျ။
သငျတို့ရဲ့ anniversary နေ့ (သို့) သငျ့ခဈြသူရဲ့ မှေးနမှေ့ာ ဒီလိုလကျဆောငျလေးတှေ ပို့ပေးနိုငျပါတယျ။
သငျ့ခဈြသူ နှဈသကျလိမျ့မယျ့ အဝတျအစား၊ ဝကျဝံရုပျ၊ သူအနှဈသကျဆုံး စာရေးဆရာရဲ့ စာအုပျတဈအုပျ စသဖွငျ့ လကျဆောငျတဈခုကို ရှေးခယျြပါ။
မှေးနမှေ့ ပို့ပေးမယျဆိုပွီး မစောငျ့ပါနဲ့။ သငျ့ခဈြသူကို ပိုပွီးတောငျစပရိုကျဖွဈစအေောငျ မှေးနမေ့တိုငျခငျ ဘယျနဖွေ့ဈဖွဈ ပို့ပေးလို့ရပါတယျ။
သငျတို့ခဈြသူနှဈယောကျဟာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အနဝေေးနခြေိနျမှာ ပငျြးစရာကောငျးတဲ့ ပုံမှနျလညျပတျမှုတှထေဲမှာ ကရြောကျနတေယျလို့ ခံစားရလြှငျ၊ အနဝေေးပမေယျ့ အခဈြတှေ အေးမသှားအောငျ ထိနျးသိမျးလိုလြှငျ ဒီအကွံပွုခကျြလေးတှကေို သတိရပွီး သငျ့ခဈြသူကို အမွဲတမျး စပရိုကျလုပျဖို့ သတိရပေးပါ။
အဝေးရောက်ချစ်သူတွေအတွက် စပရိုက်ဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ
အနေဝေးတဲ့ အချစ်ရေး(LDR)ဟာ ခိုင်မြဲဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဆက်အသွယ်မပြတ်နေမယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိပြီး သစ္စာရှိမယ်ဆိုရင် ပိုမိုခိုင်မာတဲ့ အချစ်ရေးမျိုးကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ LDR တွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အနီးကပ်နေတဲ့ စုံတွဲတွေထက်တောင် အချစ်ရေးပိုခိုင်မာတာကို တွေ့ရပါတယ်၊
သူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကို သတိရတတ်မယ်၊ သင့်အတွက် သူလုပ်ပေးတဲ့ အရာအားလုံးကို သတိထားမိမယ်ဆိုရင် အဝေးရောက် သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုပိုပြီးတောင် တန်ဖိုးထားစေနိုင်ပါတယ်။
အနေဝေးတဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုကို အသက်ဝင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? မငြီးငွေ့သွားအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ?
ယနေ့ခေတ်နည်းပညာတွေက ပိုပြီးတောင်လွယ်ကူပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ သင့်ချစ်သူ အံ့လားသင့်သွားအောင်၊ သင့်ကို ပိုချစ်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ ရှိပါတယ်။
၁။ ရိုမန့်တစ်ဆန်တဲ့ ညစာ
သင်တို့နှစ်ယောက်က အနေဝေးတဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေရင်တောင် သင့်ချစ်သူနှင့် နီးကပ်နေတယ်လို့ ခံစားရစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မိုင်တွေဝေးနေပေမယ့် ရိုမန့်တစ်ဆန်တဲ့ ညစာဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Video call ခေါ်ပါ။ အင်တာနက်ကနေ ချက်ချင်းတွေ့နိုင်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကားပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
သင်တို့ရဲ့ anniversary လိုနေ့မျိုးမှာ အထူးညစာစားချင်တယ်ဆိုရင် ရိုမန့်တစ်ဆန်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ၊ ဖယောင်းတိုင်တွေနဲ့ အခန်းကို အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်စလုံး ကြိုက်တဲ့ အစားအသောက်လေးတွေ ရွေးချယ်ပါ။
၂။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ရည်စူးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်
သူ့အတွက် ရည်စူးထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်က မျှော်လင့်မထားတဲ့ အချိန်မှာ သင့်ချစ်သူကို အံ့အားသင့်စေဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဝေးကွာနေပေမယ့် သင့်ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အချစ်ခံစားချက်များကို အပြည့်အဝ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ရိုမန့်တစ်သီချင်းများစွာ ရှိပါတယ်။
သင်ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးဖော်ပြပေးတဲ့ special သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင် ၊ ရိုမန့်တစ်ဆန်အောင် သူ့အတွက်ရည်စူးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနမှတဆင့် သီချင်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
ရေဒီယိုမှ ကြေညာတဲ့အခါ သင့်ချစ်သူနားထောင်နိုင်အောင် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ တင်ပေးတာ သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ခ်ျကတဆင့် ပို့ပေးပါ။
ဂစ်တာတီး၊ သီချင်းဆိုပြပြီးလည်း သင့်ချစ်သူကို ရို နိုင်ပါတယ်နော်။
၃။ အချစ်ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးပေးပါ
သင့်ချစ်သူကို အချစ်သီချင်းလေးတွေ၊ အချစ်ကဗျာလေးတွေ၊ ရိုမန့်တစ်ဆန်တဲ့ စာသားလေးတွေ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ကဗျာရေးဖို့ ပါရမီ မပါကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်ရင်အခုန်ဆုံးခံစားချက်များကနေ သီချင်းတစ်ပုဒ် သို့ ကဗျာတစ်ပုဒ်အဖြစ် ချရေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဝေးကွာနေတာက ခက်ခဲလှပေမယ့် သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးတွေ၊ ခံစားချက်တွေနဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးခြင်းက သင့်ဘဝမှာ သူကဘယ်လိုအရေးပါကြောင်း သင့်ချစ်သူ သိစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ ခံစားချက်တွေကို စာသားထဲမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ပြောပါ။
ကဗျာအားလုံးက ကာရန်ညီဖို့ မလိုပါဘူး။ အရေးကြီးဆုံးက ရိုမန့်တစ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ရင်းမှန်သာ ဖြစ်ရပါမယ်။ အကူအညီလိုရင် သင့်အရေးအသားကို တိုးတတ်စေဖို့ အကြံပေးချက်တွေ အွန်လိုင်းမှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
၄။ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေ ပို့ပေးပါ
ယနေ့ခေတ်မှာ သိပ်အားထုတ်စရာမလိုဘဲ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ဖို့ tik tokလို applications များစွာရှိလာပါပြီ။ ဒါ့ပြင် ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကို ပို့ဖို့၊ လက်ခံဖို့ မိနစ်အနည်းငယ်သာ ကြာပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ရီစရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူ ရယ်စရာဗီဒီယိုလေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ RSအမှတ်တရလေးတွေ၊ ပျော်ရွင်စရာအချိန်လေးတွေကို စုစည်းပြီး ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဗီဒီယို appတစ်ခု ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။
သင့်ကိုယ်သင် မှတ်တမ်းမတင်ချင်ဘူးဆိုရင် ရိုမန့်တစ်စာသားလေးတွေ၊ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို စုစည်းပြီး ဒါမှမဟုတ် သင့်အသံမှတ်တမ်းထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေထည့်တာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆန္ဒရှိရင် YouTube သို့ သင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ဗီဒီယိုကို တင်နိုင်ပါတယ်။
၅။ ချစ်သူကို လက်ဆောင်တစ်ခုနဲ့ စပရိုက်လုပ်ပေးတာ
သင့်ချစ်သူအိမ်ကို deli နှင့် လက်ဆောင်တစ်ခု ပို့ပြီး စပရိုက်လုပ်ပေးပါ။
သင့်ချစ်သူရဲ့ အိမ် သို့ အလုပ်လိပ်စာ သင့်မှာရှိရင် သင်ပို့ချင်တဲ့အခါတိုင်း စပရိုက်လက်ဆောင် ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်တို့ရဲ့ anniversary နေ့ (သို့) သင့်ချစ်သူရဲ့ မွေးနေ့မှာ ဒီလိုလက်ဆောင်လေးတွေ ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ချစ်သူ နှစ်သက်လိမ့်မယ့် အဝတ်အစား၊ ဝက်ဝံရုပ်၊ သူအနှစ်သက်ဆုံး စာရေးဆရာရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် စသဖြင့် လက်ဆောင်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
မွေးနေ့မှ ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး မစောင့်ပါနဲ့။ သင့်ချစ်သူကို ပိုပြီးတောင်စပရိုက်ဖြစ်စေအောင် မွေးနေ့မတိုင်ခင် ဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပေးလို့ရပါတယ်။
သင်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနေဝေးနေချိန်မှာ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုတွေထဲမှာ ကျရောက်နေတယ်လို့ ခံစားရလျှင်၊ အနေဝေးပေမယ့် အချစ်တွေ အေးမသွားအောင် ထိန်းသိမ်းလိုလျှင် ဒီအကြံပြုချက်လေးတွေကို သတိရပြီး သင့်ချစ်သူကို အမြဲတမ်း စပရိုက်လုပ်ဖို့ သတိရပေးပါ။